नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : हामी नेपाली सबै जान्ने, सबै डाक्टर, सबै बैज्ञानिक !!
हामी नेपाली सबै जान्ने, सबै डाक्टर, सबै बैज्ञानिक !!
कोरोना भाईरसले विश्व आतंकित छ, विश्व स्वास्थ्य संगठन देखी बैज्ञानिक, रिसर्चरहरुको निद्रा हराम भएको छ । अचम्म लाग्छ - यस्तो बेला सँसारमा हामी नेपाली मात्रै हौंला जो आतंकित छैनौं । जो भी होगा देखा जायगा सँस्कारका ढुक्क हामीलाई कोरोनाले के छुन्थ्यो र ! यसो हेर्यो फेसबुक र अनलाइनहरुमा हामी सबै डाक्टर, सबै जान्ने सुन्ने मात्र देखिन्छ । बेसार, हर्‍रो, बर्‍रो, अदुवा, कागती पानी लगायत का उपचार बिधी देखी देखी थरी थरिका मास्क बनाउने र यसो गर्नु उसो गर्नु भन्नेमा हामीहरु नै अगाडि छौं । रुघाखोकी देखी कोरोना सम्म जे जे भए पनि यसो गर्नु र उसो गर्नु भन्दै उपदेश फर्माउन सिपालु हामीहरु सबै जान्ने, सबै डाक्टर, सबै बैज्ञानिक भएकोले होला कोरोना नेपालमै निसास्सिरहेको ! तर कृपया लापर्वाही नगरौं चिकित्सकहरुको सुझाब ग्रहण गरौं, साबधानी अपनाउँ अन्यथा कोरोनाले हामीलाई बाँकी राख्ने छैन । र अन्त्यमा, श्री पशुपतिनाथअले हामी सबैको कल्याण गरुन । भरोसा तिनकै मात्र भयो अब !